काम इन्कार | Law & More B.V.
ब्लग » काम अस्वीकार
यदि तपाइँका निर्देशहरू तपाइँको कर्मचारीले अनुसरण गरेनन भने यो धेरै कष्टकर हुन्छ। उदाहरण को लागी, एक कर्मचारी जसमा तपाई गणना हुन सक्नुहुन्न सप्ताहन्तको वरिपरि कार्य फ्लोरमा देखा पर्न सक्छन् वा जसले तपाईलाई सफा पोशाक कोड लागु हुँदैन भन्ने सोच्दछन् उसलाई वा उनीलाई लागु हुँदैन। यदि बारम्बार यस्तो भयो भने यो धेरै निराश हुन सक्छ। भाग्यवस, कानूनले यसको लागि समाधान प्रदान गर्दछ। दुबै केसमा र धेरै अन्यमा तपाईलाई कामबाट वंचित गर्न सकिन्छ। यस लेखमा हामी वर्णन गर्दछौं कि यो केस हो र तपाईं यसको बारे रोजगारदाताको रूपमा के गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले हामी तपाईलाई रोजगारदाताले दिनु पर्ने कुन निर्देशनहरू लिन्छौं। अर्को, हामी छलफल गर्नेछौं कि कुन निर्देशनले एक कर्मचारीले अस्वीकार गर्न सक्दछ र जुन अर्कोतर्फ काम अस्वीकारमा लैजान्छ। अन्तमा, हामी छलफल गर्नेछौं तपाईसँग रोजगारदाताको रूपमा के विकल्पहरू छन् जुन काम अस्वीकारका साथ व्यवहार गर्नका लागि।
तपाईलाई रोजगारदाताको रूपमा कस्तो निर्देशन दिन अनुमति छ?
एक रोजगारदाताका रूपमा तपाईसँग काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न निर्देशन दिने अधिकार छ। सिद्धान्तमा, तपाइँको कर्मचारीले यी निर्देशनहरु पालना गर्नु पर्छ। यो रोजगार सम्झौताको आधारमा कर्मचारी र नियोक्ता बीच अधिकारको सम्बन्ध देखि हुन्छ। निर्देशनको यो अधिकार दुबै कामसँग सम्बन्धित नियमहरू (जस्तै कामका काम र कपडा नियमहरू) र कम्पनी भित्र राम्रो अर्डरको पदोन्नतिमा लागू हुन्छ (उदाहरणका लागि काम गर्ने घण्टा, आचारको सामूहिक मापदण्ड र सामाजिक मिडियामा बयान)। तपाईंको कर्मचारीलाई यी निर्देशनहरू पालना गर्न बाध्य छ, उनीहरू रोजगार सम्झौताको शब्दबाट स्पष्ट छैनन् भने पनि। यदि ऊ वा उनी त्यसो गर्न असफल हुन्छन् र लगातार रूपमा त्यसो गर्दछन् भने, यो काम अस्वीकारको मामला हो। जे होस्, यहाँ धेरै साना बारहरू छन्, जुन तल वर्णन गरिएका छन्।
तपाइँबाट एक रोजगारदाताको रूपमा असाइनमेन्ट अनुसरण गर्न आवश्यक छैन यदि यो अनुचित छ। असाइनमेन्ट उचित छ यदि यो एक राम्रो कर्मचारी भएको सन्दर्भमा रोजगार सम्झौताको भागको रूपमा देख्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि, व्यस्त क्रिसमस अवधिमा पसलमा ओभरटाइम काम गर्न अनुरोध एक उचित काम हुन सक्छ, तर यदि यसले hours 48 घण्टा भन्दा बढि काम गर्ने हप्तामा पुर्‍याउँछ भने (जुन यसबाहेक, सेक्शन २ subse उप-अंशको आधारमा गैरकानूनी हो। श्रम ऐनको १)। कार्यभार उचित हो र त्यसकारण कामको अस्वीकार केसको अवस्था र यसमा रुचि भएको कुरामा निर्भर गर्दछ। कर्मचारीको आपत्ति र काम दिनको लागि नियोक्ताका कारणहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। यदि यो अनुमान गर्न सकिन्छ कि काम गर्न अस्वीकार गर्न कर्मचारीको एक तत्काल कारण छ भने, काम अस्वीकृत गर्ने सवाल नै छैन।
काम गर्ने स्थितिको एकपक्षीय संशोधन
यसबाहेक, एक रोजगारदाता एकतरफा कामका सर्तहरू परिवर्तन गर्न सक्दैन। उदाहरण को लागी, तलब वा कार्यस्थल। कुनै परिवर्तनहरू सँधै कर्मचारीको परामर्शमा हुनुपर्दछ। यसको अपवाद यो हो कि केही केसहरूमा यो अनुमति दिइन्छ यदि यो रोजगार सम्झौतामा समावेश छ वा यदि तपाईं, रोजगारदाताको रूपमा, त्यसो गर्नमा गम्भीर चासो राख्नुहुन्छ भने। यदि तपाईंसँग यसको बारेमा कुनै प्रश्न छ भने, हामी मा Law & More उनीहरूलाई जवाफ दिनको लागि तयार छन्।
जब एक कर्मचारी तपाइँको निर्देशन अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ?
यस तथ्यको साथमा कि एक कर्मचारीले एक अनुचित कार्यभार अस्वीकार गर्न सक्दछ र यसका साथै, एकतरफा कामका सर्तहरू बदल्न सक्दैन, त्यहाँ राम्रो कर्मचारी र नियोक्ता स्थिति को आवश्यकताहरु बाट उत्पन्न अतिरिक्त दायित्वहरु पनि छन्। यसमा स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्ड पर्छन्। उदाहरणका लागि, एक कर्मचारीले गर्भावस्था वा कामको लागि असक्षमताको घटनामा कर्मचारीहरूको शारीरिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। एक कामदारले कामदारलाई निर्देशनहरू पालना गर्न सक्दैन जुन उसको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्दछ र सुरक्षित काम गर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। सचेत आपत्तिहरू पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ, यदि उपयुक्त फाराममा काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ।
यदि तपाइँका निर्देशनहरू माथि वर्णन गरिएको मापदण्डको पालना गर्दछ र कर्मचारीले निरन्तर रूपमा उनीहरूलाई इन्कार गर्न जारी राख्छ भने, यसले काम अस्वीकार गर्दछ। त्यहाँ केही सामान्य केसहरू छन् जुन प्रश्नमा त्यहाँ काम अस्वीकार छ कि छैन। उदाहरण को लागी, काम को लागी असक्षमता को स्थिति मा, (बिरामी) अनुपस्थिति वा व्यावहारिक कार्यहरु गर्न चाहँदैन जो एक कर्मचारी किनभने तिनीहरू केवल आफ्नो नियमित कर्तव्य बाहिर छन्। कामको अस्विकार हो वा हुँदैन भन्ने कुरा केसको परिस्थिति र तपाईंको कर्मचारीको आपत्तिमा निर्भर गर्दछ, त्यसैले केही सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ र आवश्यक परेमा कानुनी सल्लाह लिनु बुद्धिमानी हुन्छ। यो निश्चित रूपमा लागू हुन्छ जब तपाईं फलो-अप चरणहरूमा विचार गर्दै हुनुहुन्छ। यसबाहेक, यदि तपाईंलाई कामको लागि वास्तवमा असक्षमता छ कि भनेर श doubts्का छ भने यदि तपाईंको कर्मचारीले यस कारणले काम गर्न इन्कार गर्दछ भने, यो जहिले पनि व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा डाक्टर वा कम्पनी डाक्टरको राय पर्खनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अन्य केसहरू वास्तवमा काम इन्कारको स्पष्ट केसहरू हुन्। उदाहरण को लागी, यदि, अंडरस्ट्याफिंग अवधिमा, तपाईंले असाधारण रूपमा आफ्नो कर्मचारीलाई समय लिनको लागि अनुमति दिनुभयो यदि ऊ वा उनी ग्राहकहरूकहाँ पुग्न सक्दछ, तर ऊ वा उनी पछि दुर्गम क्षेत्रमा छुट्टीमा जान्छन् र पूर्ण रूपमा पहुँचयोग्य छैन।
काम अस्वीकारको नतिजा
यदि तपाइँको कर्मचारीले आफ्नो काम गर्न अस्वीकार गर्नुभयो भने, तपाइँ एक रोजगारदाताको रूपमा स्वाभाविक रूपमा तपाइँको अधिकार कायम गर्नका लागि चाँडो चाँडो हस्तक्षेप गर्न चाहनुहुन्छ। यस अवस्थामा उपयुक्त कदम चाल्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं कर्मचारी मा एक अनुशासनात्मक उपाय थोपाउन सक्नुहुन्छ। यसमा आधिकारिक चेतावनी जारी गर्ने वा अस्वीकृत कार्य घण्टाको लागि रोकिने भुक्तान समावेश हुन सक्छ। बारम्बार काम गर्न अस्वीकारको घटनामा, अधिक दूरगामी उपायहरू लिन सम्भव छ खारेज वा सारांश खारेज. सिद्धान्तमा, रोजगार अस्वीकार बर्खास्तको लागि एक जरूरी कारण हो।
तपाईंले माथि पढिसक्नु भएपछि, त्यहाँ कामको इन्कार भएको खण्डमा र यस मामिलामा के उपयुक्त उपायहरू लिन सकिन्छ भन्ने प्रश्न धेरै ठोस परिस्थितिहरू र नियोक्ता र कर्मचारी बीचका सम्झौताहरूमा निर्भर हुन्छ। यसका बारे तपाईलाई केहि प्रश्नहरू छन्? कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More। हाम्रो विशेष टीमले व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रयोग गर्दछ। हामीसँगै हामी तपाईंको सम्भावनाहरूको मूल्या will्कन गर्नेछौं। यस विश्लेषणको आधारमा, हामी तपाईंलाई उपयुक्त अर्को चरणहरूमा सल्लाह दिन खुसी हुनेछौं। यदि यो आवश्यक भएमा, हामी तपाईंलाई प्रक्रियाको बखत सल्लाह र सहयोग दिन्छौं।
अघिल्लो पोस्ट गुनासो
अर्को पोस्ट राजीनामाको ऐन